musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Entertainment » Zvepabonde Mahara uye Guta Rwendo
Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mira. Izvo zvaifanirwa kuverenga Mahara Bonde MUGuta Rwendo? Izvo hazvingagadziriswe nenzira yegirama here? Chokwadi zvaizoitika, asi zvingangove zvisiri izvo chaizvo kune iwo maratidziro atiri kuda kuongorora. Tinoda kushanyira Bonde NEGuta nzvimbo.
Ndiani asingayeuke furati raCarrie newadhiropu yayo yekunyepedzera?
Kana iyo Manolo Blahniks shangu chitoro chakabata maziso ake kanopfuura kamwe apo iye aifamba achitaura. Rangarira mutsetse une mukurumbira, "Mhoro, mudiwa" apo anga asiri kutaura nezvemurume?
Uyezve kune Meatpacking District uko Samantha anopinda mune tiff ine 3 transvestites.
Kune vanofa vakaomarara vateveri veTV "Bonde neGuta," kune zvakawanda zviyeuchidzo kwakakomberedza New York City uko nyaya inoitika nevatambi vakuru Carrie, Samantha, Miranda, naCharlotte. Kubva kunzvimbo yavo yavanofarira kusangana nechikafu nekuyanana, kuenda kuna Charlotte nzira yaanofarira kumhanya kuJacqueline Kennedy Onassis Reservoir, kuenda kubhawa raSteve raakatumidza zita rembwa yake, kunzvimbo dzakawanda-zhinji dzavakasangana nadzo kunwa, NYC Zvepabonde uye Guta hotbed, hapana pun yakagadzirirwa.
Chokwadi, unogona kubhadhara Zvepabonde uye nekushanya kweGuta - nebhazi semuenzaniso, asi wadii kuongorora nguva yako wega nevanakudana navo mukati mahara akasununguka-anotungamirirwa?
Heano mamwe enzvimbo dzinozivikanwa dzinoonekwa paTV show iwe yaungade kumira mukati yekuruma, kunwa, kana kutarisa-kuona.
Manolo blahnik pa31 W 54th Street
Carrie anopfuura Manolo Blahnik shangu chitoro pane kanopfuura kamwe chiitiko muTV show mfululizo. Chimwe chiitiko kunyanya apo paanoona kuti akashandisa $ 40,000 kubhutsu ega - mari yaaida ikozvino kutenga imba yake.
Ucharangarira apo Carrie naVaBig vakawira mumvura muresitorendi iyi yeCentral Park? Vakanga varambana asi vakafunga kusangana masikati kuti vabate. Mushure mekunge Miranda amuyambira kuti zvirinani arege kumutsvoda, apo VaBig vakasendamira ipapo, Carrie akadzoka achidzokera mumvura ndokuuya naye.
Da Marino yekudyira pa220 W 49th Street
Kutaura nezvaCarrie naBig nemaresitorendi, zvakadii nezveDa Marino pavanodzoka zvakare uye pavanenge vachidya chikafu chemanheru uye chinotonhorera Italian Restaurant, uko Carrie anodzidza kuti anogara ari muridzi achiuya kuzovakwazisa. Iye anobva asunungurwa naBig paanoimba "Pandaiva nemakore gumi nemanomwe," uye Carrie akapotsa arutsa waini yake.
St Mark's Comics pa11th Street
Zvakanaka ngatitore kure naCarrie naBig kwekanguva tidzokere kuchitoro cheSt. Apa ndipo paakasangana naWade - murume wechidiki asina hanya munyika (uyo achiri kugara nevabereki vake) zvakashamisa Carrie mushure mekunge amai vake vapinda apo vese vaive vakakwidza mbanje uye iye achipomera sora pana Carrie. Iye anoenda pamwe chete naro uye anotora masora iye achienda nawo kune chimwe chiitiko chinonakidza paimba yaCarrie paanoigoverana naSamantha, Charlotte, naMiranda, uye kana mushure mekusungwa nekuiputa pamberi pevanhu, Carrie goofily anozivisa zuva iri seiro paakasungwa nekusvuta doobie.
Magnolia Bhekari pa401 Bleecker Street
Izvi zvinogona kunge zvisiri chiitiko chisingakanganwike chaCarrie naMiranda vachigovana makeke apo pavanenge vachigovana pamusoro pehukama, asi bhekari iri rakazove rakakurumbira pasi rese nekuda kwechikafu chakagovaniswa. Uye ndinoreva kuti ndiani asingade chikonzero chekumira mubhekari kuti awane mushonga?
Chifaro Chefu pa156th uye 7th Avenue S
Izvo zvinotitungamira kune kurapa kwakabata Charlotte zvakanyanya zvekuti kupindira kwaifanirwa kuitwa muchiitiko apo Rabbit vibrator yake, iyo yaakatenga muchitoro chidiki ichi, yakatorwa kuitira kuti adzokere kuhupenyu hwezuva nezuva hwehupenyu nekuwana. zvikonzero zvekubva pamba pake zvekare.
Jefferson Musika Bindu pakati pe6th Avenue uye W 10th Street
Kufamba uchienda kune zvimwe zvakapusa zvinhu, zvakadii nezve inoyevedza nharaunda gadheni uko Miranda naSteve vanosarudza kuroora? Akanga akatsunga kutsvaga nzvimbo yaive "isiri-icky," uye akazviita apo bhegi rake rekutengesa rakatyoka pamberi pesuwo rebindu. Chiratidzo chechokwadi taizoti iyi ndiyo nzvimbo.
Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis naSarah Jessica Parker (Mufananidzo naBill Davila / FilmMagic)
Plaza Hotel pa5th Avenue uye 59th Street
Chaizvoizvo, chero rwendo kuenda kuNYC runofanira kusanganisira kanenge kufamba-kuburikidza kwenzvimbo yekutandarira kuThe Plaza Hotel, handizvo here? Uye hongu, pakanga paine chiitiko pano, zvakare, Carrie paakataura naBig mushure mebato rake rekuzvipira kuna Natasha - waakadaidza kuti tsvimbo isina mweya. Mune ino chiitiko anodzokororazve chidimbu chemuvhi "Iyo Nzira Isu Tanga Tiri," apo iye anokwesha bvudzi raBig neminwe yake ndokuti, "Musikana wako akanaka, Hubble."
Uye kune dzimwe nzvimbo dzakawanda dzekutsvaga - Russian Samovar iri pa256 W 52nd Avenue apo Carrie anoenda pazuva rake rekutanga ne "Russian," inoridzwa naMikhail Barishnykov, neColumbus Circle Fountain pa 59th Street uye 8th Avenue uko Carrie anotyora Moyo waAidan kwechipiri uye zvakanaka.
Ikozve kune iyo New York City Ruzhinji Raibhurari Main Bazi pa5th Avenue uye 42nd Street uko Carrie naBig vanofanirwa kuroora (mazwi akakosha achifanirwa kuve). Uye chivakwa icho Carrie naBig vanowana chiroto chavo NYC furati kwavanofanirwa kuve (kune mazwi iwayo zvakare) vanogara mushure memuchato muna 1010 Fifth Avenue. Haiwa, mira. Ndiyo imwe yemamuvhi mushure mekuratidzwa kweTV. Asi ndiyo imwe bhaketi rondedzero yenzvimbo dzekushanyira.